शम्भुप्रसाद फुँयाल | गृहपृष्ठ
Home घर संसार शम्भुप्रसाद फुँयाल
महाप्रबन्धक, सीई कन्ष्ट्रक्शन प्रालि
दुई सयओटासम्म घर निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं
ग्राण्डी भिल्ला कस्तो किसिमको परियोजना हो ?
ग्राण्डी भिल्ला सबै वर्गका मानिसका लागि आवासको परिकल्पना गरेर निर्माण गरिएको परियोजना हो । यो परियोजनाको निर्माण २०६८ साल साउनबाट शुरू गरिएको हो । त्यतिबेला घरको मूल्य न्यूनतम ४८ लाख निर्धारण गरिएको थियो । तर, अहिले मूल्यवृद्धि भएर ५५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । समयअनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने भएका कारण मूल्यमा हेरफेर गरिएको हो । यसलाई हामीले ‘इञ्जिनीयरिङ भ्यालू’ भन्ने गर्छौं । यस परियोजनामा हामीले ग्राहकको चाहनाअनुसार ठूलो तथा सानो घर निर्माण गरिदिने सुविधा दिएका छौं । विशेषगरी यसमा साना घरको माग बढी छ ।
यो परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
ग्राण्डी भिल्ला निर्माणाधीन परियोजना हो । यसमा हामीले मागअनुसार १ सय ५० देखि २ सयओटासम्म घर निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं । परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म करीब ४० घरको संरचनागत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी मङ्सिरदेखि निर्माण सम्पन्न भएका घर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ । बूकिङको प्रक्रिया भने जारी नै रहनेछ ।
परियोजनाका लक्षित वर्ग को हुन् ?
ग्राण्डी भिल्लामा रहेका घर सर्वसाधारण नेपालीको पहुँचमा ल्याउने हाम्रो योजना हो । सोहीअनुसार यहाँको मूल्य अत्यन्त सुलभ छ । विशेषगरी कुनै पेशामा आबद्ध श्रीमान्–श्रीमती, जो पैतृक सम्पत्तिको भर नपरी स्वआर्जनबाट आफ्नो घर बनाउन चाहन्छन्, उनीहरू नै हाम्रा लक्षित ग्राहक हुन् । आफ्नै आम्दानीबाट घर किन्न सक्ने वर्गलाई ध्यानमा राखेर ग्राण्डी भिल्लाको अवधारणा आएको हो । हामीले घर खरीद गर्न चाहने मानिसलाई कर्जा उपलब्ध गराउन विभिन्न बैङ्कलाई सिफारिश गर्न सक्छौं ।
कर्जा सुविधाका लागि ग्राहकले के गर्नुपर्छ ?
हामीले आफै ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने होइन । तर, कुनै ग्राहकले यसको माग गरेमा बैङ्कसमक्ष हामीले सिफारिश गर्न सक्छौं । कर्जा लिएबापत ग्राहकले छुट्टै धितो बुझाउनुपर्दैन । ग्राहकले खरीद गर्न चाहेको घरलाई नै धितो राखेर कर्जा लिन सकिन्छ । कम्पनीको विश्वासमा ग्राहकले उक्त कर्जा सजिलै पाउँछन् ।
ग्राहकले ग्राण्डी भिल्लाका घरहरू किन खरीद गर्ने ?
ग्राण्डी भिल्ला अवस्थितिका हिसाबले चक्रपथबाट दुई किलोमिटर मात्र बाहिर छ । आधारभूत पूर्वाधारहरूको निर्माण, व्यवस्थित बसोबास, सुपथ मूल्य, आकर्षक घर, शान्त वातावरण यसका विशेषता हुन् । यसबाहेक अन्तरराष्ट्रियस्तरको ग्राण्डी अस्पताल, ग्राण्डी टावर पनि यो परियोजनानजिकै पर्छन् । आफ्नो बजेटअनुसारको पूर्ण घर पाइने हुनाले ग्राहकका लागि ग्राण्डी भिल्ला अति उपयोगी छ ।